ကဏ္ဍစုံ ပြခန်း: အိမ်ထောင်ရေးအချစ်တည်မြဲတဲ့ ပုံသေနည်း
ညချစ်သူ | 12:21 AM | ဗဟုသုတ
ညချစ်သူ | 12:21 AM |
တကယ်လို့ "အိမ်ထောင်ရေးအချစ်တည်မြဲတဲ့ ပုံသေနည်း"ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် သင်လိုက်နာနိုင်မလား?
လိုက်နာနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်... ဘယ်သူမဆို တည်မြဲတဲ့ မပြောင်းလဲအချစ်ကို လိုချင်ကြတာပဲ မဟုတ်လား!
အမေရိကန်ပညာရှင် Catherine Johnsonက လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေလုပ်ပြီး "အိမ်ထောင်ရေးအချစ် တည်မြဲတဲ့ ပုံသေနည်း"ကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
Catherineက အိမ်ထောင်စုံတွဲ (၁ဝဝ)တွဲကို တွေ့ဆုံပြီးဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ အဲဒီအိမ်ထောင်စုံတွဲရဲ့ အိမ်ထောင်သက်က အနည်းဆုံး(၇)နှစ်နဲ့ အများဆုံး(၅၅)နှစ်ရှိသူတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ အောက်ကအချက်တွေကတော့ လင်မယားအချစ်တည်မြဲရေးမှာ နှစ်ဦးစလုံးရှိအပ်တဲ့နည်းတွေဖြစ်တယ်။
ကျွန်မတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ လင်မယားအတွဲတစ်ရာထဲမှာ အများစုက အချင်းချင်းသိပြီးတဲ့နောက်မှာ ချက်ချင်း ချစ်ခင်ရင်းနှီးသွားကြသူတွေဖြစ်တယ်။ တားဆီးလို့မရနိုင်တဲ့ ခံစားချက်မျိုးနဲ့ခံစားရပြီး အတူတကွ ဘဝကိုအတူမျှဝေဖို့ သူတို့မျှော်လင့်ကြသတဲ့။
ဒီလို ချစ်ခင်ရင်းနှီးတဲ့ ပုံသေနည်းမှာ ညီညွတ်တဲ့၊ အလေးထားတဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေပါတယ်။ ဒါဟာ တူညီတဲ့ပြင်းပြမှုအပေါ် အခြေခံသလို အချင်းချင်းမတူညီမှုအပေါ်မှာလည်း အခြေခံတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ ရှုထောင့်တစ်ခုကို အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက အခုလို ပြောပြခဲ့တယ်။ "ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးက ဆန့်ကျင်ဖက်အကျင့်စရိုက်ရှိတဲ့ လူနှစ်ယောက်ကနေ ညီညွှတ်တဲ့အနေအထားမှာ ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်"လို့ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အမျိုးသားက အကောင်းမြင် ပျော်ပျော်နေတတ်သူဖြစ်ပြီး သူက အဆိုးမြင်စိတ်တွေများသူဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်မှာ တူညီတဲ့ကိုးကွယ်မှုဘာသာရှိတယ်။ လူမျိုးတူတယ်။ သူက သူ့အမျိုးသားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို စွဲလမ်းတယ်၊ သူ့အမျိုးသားက သူ့ရဲ့သိမ်မွေ့ပျော့ညံ့တာကို ချစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးက လူတွေပြောနေကြတဲ့ ကိုယ်အခြမ်းကို ရှာတွေ့သွားတာပဲဖြစ်တယ်။
တစ်ယောက်က မနက်စာပြင်ဆင်နေချိန် ကျန်တစ်ယောက်က ခွေးထွက်ကျောင်းမယ်။ မနက်စာစားပြီးနောက် မနက်ပိုင်းသတင်းစာကို နှစ်ယောက်အတူဖတ်မယ်။ အိမ်ထောင်ရေးတည်မြဲတဲ့ လင်မယားလိုလိုတိုင်းက ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်။ ဒီလိုပုံစံက ဘာပျော်ရွှင်စရာမှ မဖြစ်စေနိုင်ဘူးဆိုပေမယ့် ဒါဟာ အိမ်ထောင်ရေးထဲ အချင်းချင်းယုံကြည်မှုနဲ့ တာဝန်ယူမှုကို ထည့်ပေးပါတယ်။
အချစ်တည်မြဲတဲ့ လင်မယားတွေက ရန်ဖြစ်ခဲပါတယ်။ သူတို့ကြားမှာ စိတ်ဆိုးစရာနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့သည့်တိုင် မှန်ကန်တဲ့ဖြေရှင်းနည်းနဲ့ သူတို့ဖြေရှင်းတတ်တယ်။ သူတို့မှာ မတူတဲ့ ဖြေရှင်းတဲ့နည်း ကိုယ်စီရှိကြမှာပေါ့။ အဓိက,က အချင်းချင်း ဖေးမအားပေးတာမျိုးက ပိုကောင်းတဲ့အကျိုးရလဒ်ကို ဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။
အိမ်ထောက်ဖက် အချင်းချင်းကြားမှာ ကိုယ့်အာရုံကို တစ်ဖက်လူရဲ့ကောင်းကွက်ပေါ်မှာပဲ စုပုံကျရောက်စေတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးက စိုပြေမှာဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ အိမ်ထောင်ဖက်နှစ်ဦးစလုံး အကောင်းမြင်တတ်သူ (postive thinker)တွေ ဖြစ်ရမယ်လို့ မဆိုပါဘူး။ သူတို့ဟာ ဝမ်းနည်းကြေကွဲတတ်သူ၊ အလောကြီးတတ်သူ၊ စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်များသူလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရင့်ကျက်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးအချစ်က "ငါတို့မှာ ချွတ်ယွင်းချက်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ အမှန်တရားကို ငါတို့လက်ခံနိုင်ရမယ်"ဆိုတဲ့ အနက်ကိုဆောင်ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်သည်လင်မယားတိုင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတာကို သိနားလည်ကြတယ်။ အိမ်ထောင်ကျပြီး ဘဝကပိုကောင်းလာတယ်လို့ သူတို့ပြောကြတယ်။ သူတို့ရဲ့အိမ်ထောက်ဖက်တွေကလည်း ဒါကိုသဘောတူလက်ခံတယ်။
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့တဲ့ လင်မယားတွေဟာ အိမ်ထောင်ရေးကပ်ဆိုးကို ကြုံခဲ့ရဖူးသတဲ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးက ကံကောင်းပြီး ဆက်ရှင်သန်ခဲ့ပြီး တစ်နေ့တခြား ပျော်ရွှင်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ ဒါဟာလည်း အိမ်ထောင်ဖက်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ချွတ်ယွင်းချက်ကို သူတို့ပြောင်းလဲသင့်တယ်ဆိုတာကို သိကြလို့ဖြစ်တယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုက လူတွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပိုကောင်းမွန်အောင် ပြောင်းလဲဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။
လင်မယားအများစုက အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ် သစ္စာစောင့်ထိန်းရုံနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်ရေးကိုတော့ တည်မြဲစေတာ အမှန်ပါပဲ။ လင်မယားကြားမှာ သစ္စာစောင့်ထိန်းခြင်းက အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်။ ဒါဟာ အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ်လိုအပ်တဲ့ သင့်လိုအပ်ချက်ကို ကိုက်ညီစေသလို သူနဲ့ ရိုးရိုးသားသား ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း သင်ပြောဆိုဆက်ဆံစေနိုင်တယ်။ သူ့ခံစားချက်အမှန်ကို ဖွင့်ပြောစေနိုင်သလို သူ့အပေါ် သင်နားလည်မှုရှိတယ်ဆိုတာကို သူခံစားသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
ပျော်ရွှင်တဲ့လင်မယားရဲ့ တန်းတူညီမျှနည်းကို ငွေကြေးထိန်းသိမ်းရေးမှာ ထင်ထင်ရှားရှားမြင်သာစေပါတယ်။ ပျော်ရွှင်တဲ့လင်မယားတိုင်းက “မိသားစုဝင်ငွေဟာ အတူတကွခံစားဖို့ဖြစ်တယ်။ သူဟာလည်းမဟုတ်သလို ငါ့ဟာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ ငွေကြေးခွဲဝေရေးအပေါ် သူတို့ဘယ်တော့မှ ငြင်းခုန်ရန်ဖြစ်တာမျိုးမရှိဘူး”လို့ တွေဝေစိတ်မရှိ သူတို့ပြောပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးအချစ်တည်မြဲတဲ့ ဒီ“သူငယ်ချင်း”တွေကြားမှာ ဇနီးဖြစ်သူက သူစိတ်ကူးအိပ်မက်ကို သူလွတ်လွတ်လပ်လပ် လိုက်လံရှာဖွေ ဖမ်းဆုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သူ့စိတ်ကူးအိပ်မက်ကို လင်ယောက်ျားနားလည်သည်ဖြစ်စေ၊ နားမလည်သည်ဖြစ်စေ သူအပေါ်ထားတဲ့ လင်ယောက်ျားရဲ့ အချစ်နဲ့လေးစားမှုက အကြွင်းမဲ့ဆိုတာကို သူသိတယ်။ လင်ယောက်ျားကလည်း ဒီအတိုင်းပဲ နားလည်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Posted by ညချစ်သူ at 12:21 AM